ဘေဘီလေးက ဩဇာသီး စားလို့ရလား ……. - Hello Sayarwon
သီတင်းကျွတ်ခါနီးပြီဆိုရင် ဩဇာသီး တွေက လှိုင်လှိုင်ပေါပါပြီ။ ဒီလို အချိန်မှ စားရတဲ့ ဩဇာသီးလေးကို ကိုယ်တိုင်က နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် စားမိချိန်မှာ တွေးမိနိုင်တာက ဘေဘီလေးရော စားလို့ရလား ဆိုတာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အဲ့အတွေးလေးအတွက် အဖြေထုတ်ပေးပါမယ်။
ဩဇာသီးမှာ ဘာအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေလဲ ……..
ချိုချိုလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းတဲ့ ဩဇာသီးလေးမှာ ဘေဘီလေးတို့အတွက် အရေးပါတဲ့ အခုလို အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ဩဇာသီး ကျွေးလို့ရလား …….
ဘေဘီလေးက အသက် ၆ လပြည့်ပြီဆိုရင် အသီးတော်တော်များများကို ကျွေးလို့ ရပါပြီ။ ဩဇာသီးကိုလည်း အသက် ၆ လပြည့်လို့ solid food တွေ စတင်မိတ်ဆက်ချိန်မှာ ကျွေးလို့ ရပါတယ်။ သေချာမှည့်နေတဲ့ ဩဇာသီး ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်။ အမှည့်လွန်နေတာမျိုးလည်း မဖြစ်ရပါဘူး။
ဘေဘီလေးကို အစေ့လေးတွေ အားလုံးဖယ်ပြီး ကျွေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဩဇာသီးက အချိုဆုံး အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့် သကြားထပ်ထည့်ကျွေးတာမျိုး မလုပ်ဖို့ ပြောပါရစေ။ ခွဲပြီး ၅ မိနစ်အတွင်းမှာ ဘေဘီလေးကို ကျွေးဖို့ လိုပါမယ်။
ဘေဘီလေးကို ဩဇာသီး ကျွေးတဲ့အခါ
အရသာရှိလှတဲ့ ဩဇာသီးလေး ကို ဘေဘီလေးက အကြိုက်တွေ့မှာ ဖြစ်သလို ဘေဘီလေးအတွက်လည်း အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဩဇာသီး မှာ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဗီတာမင် C က ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးကျန်းမာစေသလို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းစေပါတယ်။
ကြီးထွားဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ ဘေဘီလေးတို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်က မရှိမဖြစ် အရေးပါပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်က အရိုးတွေကို သန်မာစေပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ပါဝင်ဖို့က အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ် ပြည့်ဝမှ ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးတွေက ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းမှာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်ဝဖို့အတွက် မဂ္ဂနီဆီယမ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို ကောင်းစွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ် တစ်မျိုးပါ။
သွားနဲ့အရိုးတွေ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းဖို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ် အပြင် phosphorous လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ phosphorous နည်းပါးမယ်ဆိုရင် အရိုးတွေ မသန်မာတာ၊ သွားပျက်စီးတာ၊ သွားဖုံးပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ phosphorous က အစာခြေဖို့နဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ကောင်းမွန်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဩဇာသီးမှာပါတဲ့ biochemical extractsက ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် စားပေးလို့ ရပါတယ်။
အသီးအနှံအများစုမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေသလို ဩဇာသီးမှာလည်း ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးမှုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကဲ….. ဘေဘီလေးကို ရာသီပေါ် ဩဇာသီးလေး ကို အစေ့တွေ ထုတ်ပြီး ကျွေးပေးလိုက်ရအောင်နော် မေမေတို့ရေ……
Health Benefits of Custard Apple for Babies https://parentinghealthybabies.com/health-benefits-of-custard-apple-for-babies/ Accessed Date 30 September 2021
Custard apple: Health benefits for your child https://www.parentune.com/parent-blog/custard-apple-health-benefits-for-your-child/2664 Accessed Date 30 September 2021